MISAONA NY TONTOLO POLITIKA : Nodimandry ny Profesora Zafy Albert
Semban-drahona ny tontolo politika eto Madagasikara. Banga iray indray ny olomanga mpikatroka politika eto Madagasikara. 14 octobre 2017
Nodimandry teo amin’ny faha-90 taonany ny profesora Zafy Albert, izay efa Filoham-pirenena malagasy teo aloha.
Raha tsiahivina dia ny alarobia lasa teo no tratran’ny tsy fahasalamana tampoka tao an-tranony ny tenany vokatry ny fahatapahan’ny lalan-drà tany amin’ny lohany na Avc. Nalefa notsaboina tetsy amin’ny hopitaly Befelatanana izy ny maraimbe fa nasain’ireo tompon’andraikitra teny an-toerana nafindra teny amin’ny hopitaly Polyclinique Ilafy izy taorian’izay. Nokasaina hoentina hotsaboina tatsy amin’ny Nosy Maorisy indray izy saingy sy vita tao an-toerana indray ny fandidiana saika hatao tany amin’ny lohany, ka voatery nafindra tatsy amin’ny Nosy La Réunion izy ny alakamisy teo.
Tonga soa aman-tsara tany amin’ny Nosy rahavavy La Réunion saingy izao nindaosin’ny fahafatesana izao ihany izy na dia efa nanaovana ala nenina rehetra. Omaly manodidina tamin’ny 11 ora maraina no fantatra fa nindaosan’ny fahafatesana an’ny profesora Zafy Albert.
Isan’ireo Filoham-pirenena fantatra fa tena nanakaiky ny vahoaka tamin’izany fotoana ny Profesora Zafy Albert ary nolazaina fa rain’ny Demokrasia ihany koa ny tenany. Tany amin’ny taona 1993 ka hatramin’ny taona 1996 no nitondrany ny firenena malagasy. Ity farany ihany koa no mpanorina ny antoko UNDD na ny « Union Nationale pour le Developpement et la Democratie ». Fa ray aman-dreny isan’ireo nandrandraina tamin’ny famahana ny krizy politika teto amin’ny Firenena tamin’ny taona 2009 koa izy.
Ity farany no nitarika ny ankolafy Zafy tamin’izany fotoana. Izy ihany koa no isan’ny niady mafy hitarika ny fampihavanam-pirenena teto amin’ny firenena nefa nodimandry izao ihany ny lehilahy saingy tsy mbola nisy dingana momba ny fampihavanana vita afa-tsy ny fitsanganan’ny rafitra sy ireo mpikambana ao aminy.
Ankoatra ny fahafantarana azy teo amin’ny sehatry ny politika dia mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny fandidiana fo izy ary isan’ireo nanana ny toerana sy fantatra teto anivon’i Afrika momba izany.
Izahay eto amin’ny gazety InoVaovao Faritra sy ny vondrona Sodiat iray manontolo dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana navelan’ny maty.